बिबाह गरेको १२ घण्टा नहुदै बेहुली मृ`त अवस्थामा भेटिए!!! – News Nepali Dainik
बिबाह गरेको १२ घण्टा नहुदै बेहुली मृ`त अवस्थामा भेटिए!!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०३, २०७७ समय: १८:०५:४६
बर्दिया बासगडी कि २४ बर्षीय शान्ति बुढा क्षेत्रि बिबाह गरेको १२ घण्टा नहुदै मृ`त अवस्थामा भेटिएकी छिन। ५ महिनाको प्रेम सम्बन्धलाई शान्ति र सन्तोषले बिबाहमा परिणत गरेका थिए।
शान्तिले बिबाह गर्ने बेला आफ्नी दिदि लाई भनेर गरेकी हुन। शान्ति र सन्तोष दिदि संगको भेटमा बिबाह को कुरा गर्दा दिदीले यदि दुवैजनाले एकअर्कालाई मन पराउछौ र एक अर्का बिना बा`च्न सक्दैनौ भने घरमा आमा बुबा हुनुहुन्छ , एक पटक आमा बुबा संग सल्लाह गरेर बिबाह गर भनेर दिदीले भनेकी थिइन।
दिदीको कुरा सुने पछि केटा होइन हामी आजै बिहे गर्ने हो मैले घरमा सबै संग कुरा गरेर आएको छु ,आज हाम्रो पार्टी पनि छ भनेका थिए। दिदि भने भोली बिहे गर्ने घरमा माग्न आउनुहोस भन्दा मानेनन।माग्न नआउने भए आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्दा हुन्छ भन्दा शान्ति र सन्तोष आफ्नो आफ्नो बाटो लागेका थिए। पछि उनीहरु दुवै जनाले बिहे गरेछन , सन्तोषको घरमा जेठी श्रीमती र छोरा-छोरि रहेछन।
बिहे गरेको १२ घण्टा नहुदै बहिनिको मृ`त्युको खबर दिदि सामु पुग्यो। दिदि बहिनि शान्ति सामु पुग्दा बहिनिलाई झु`ण्डि`एको अवस्थामा ट्या`इलेटमा देखीन। बहिनीको अवस्था हेर्दा आफै झु`न्डेको जस्तो थिएन अरु कसैले झु`न्ड्या`ईएको जस्तो थियो। शान्ति भन्दा सानो ट्या`इलेट मा एउटा हात बाहिर शरीर भित्र ,खुट्टा चप्पल ,ढोका खुल्लै राखेर कसैले आ`त्मह`त्या गर्छ भनि आ`क्रोस भएका छन।
Last Updated on: March 16th, 2021 at 6:05 pm